Hurumende Yoongorora Mari Dzinotambiriswa Vakuru veMakambani Ayo
Hurumende inonzi yatora matano ekuita ongororo pamusoro pemari dzinotambiriswa vakuru vemakambani ehurumende. Izvi zvinotevera mashoko ekuti vamwe vakuru vemakmbani ehurumende vari kutambiriswa mari inosvika zviuru gumi nezvina zvemadhora eku America pamwedzi. Mari idzi dzinosanganisirawo mari dzekubatsirikana nezvimwe.
Zvinonzi mari idzi hadziendarane nemabasa anoitwa nevakuru ava.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa divi rebazi rinoona nezvemakambani ehurumende, kanawo gurukota racho, VaJoel Gabbuza.
Asi vachitaura nepanhau repa internet, reZimonline rinotiwo, VaGabbuza vakati ichokwadi kuti pane ongororo iri kuitwa. VaGabbuza vakati ongororo iyi iri kuitwa sezvo paine mutsauko mukuru wemari dzinotambirwa nevakuru vemakambani ehurumende.
Bepanhau iri rinoti makambani gumi akatumira magwaro awo kubazi re State Enterprises. Asi vane ruzivo nezviri kuitika vanoti mamwe makambani aya haasi kuendesa chokwadi sezvo ari kutya kuti anogona kupinzwa pana taisireva.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzehupfumi, VaRejoice Ngwenya, vanoti zviri kuitika zvinoratidza kuti hurumende haikwanise kupedza huori huripo. VaNgwenya vanotiwo zvinhu zviri pachena kuti vanhu vari kuita zvakadai, vakapinzwa mabasa neZanu PF.